eParewa || Peace and Prosperity » कसरी गर्न सकिन्छ ब्याबसायिक अम्बा खेती जान्नुहोस ।
कसरी गर्न सकिन्छ ब्याबसायिक अम्बा खेती जान्नुहोस ।
२०७७ चैत २६ गते बिहिबार ०३:१०
फलफूल स्वास्थको लागि त फाईदा जनक छदै छ । ब्याबसायिक खेती मार्फत बजारीकरण गर्न सके आर्थिक समृद्धिको आधार समेत बन्न सक्छ ।
व्यावसायिक अम्बा खेती गर्ने तरिकाबारे जानिराखौ
अम्बालाई उष्ण र उपोष्ण हावापानी चाहिन्छ । अम्बालाई २३ डिग्री सेलसियसको तापक्रम र १००० देखि २००० मिलिलिटरको वार्षिक वर्षा आवश्यक पर्छ । नेपालमा हाल मुख्य रुपमा बैशाख-जेठमा फूल फुल्ने र साउन-भदौमा फल टिप्ने गरिन्छ जसलाई बर्षे अम्बा भनिन्छ । यी अम्बाको मूल्य कम हुनाको साथै त्यति स्वादिलो हुँदैन । जबकी हिउद याममा भारतबाट ठूलो मात्रामा हिउदे अम्बा महँगोमा खरिद गरिन्छ । तसर्थ अब हामीले हिउद (जाडो) याममा बेमौसमी अम्बा फलाउनुपर्छ ।
-अम्बा कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ?
-अम्बा खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
-अम्बाका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
-अम्बाको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाडल खन्नु पर्दछ ?
-नेपालमा अम्बाका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ?
-अम्बाको बिरुवा उत्पादन गर्न कुन–कुन विधि अपनाउ सकिन्छ ?
-अम्बाको बोटहरुमा कस्ता–कस्ता कीराहरुले सताउछन् ?
-अम्बालाई ‘खटिरे’ रोग लागे के गर्ने ?
रोगले आक्रमण गरेका भागलाई हटाई जलाउनु र काटछाट गरेको ठाँउमा ‘वोर्डो पेष्ट’ बनाएर छर्कनु पर्दछ। जब माटोमा ‘क्याल्सियम’ र ‘बोरन’ को कमी हुन्छ तब यो रोग देखा पर्न सुरु गर्छ। त्यसैले बेला बेलामा ‘क्याल्सियम नाईट्रेट’ र ‘बोरेक्स धुलो’ प्रयोग गर्नु पर्दछ। रोग सक्रमण को सुरुवातसँगै विरुवालाई १ प्रतिशतको ‘वोर्डेक्स मिक्स’ बनाएर पनि छर्न सकिन्छ। त्यस्तै लाइम सल्फर १५-१५ दिनको अन्तरमा ३-४ चोटी सम्म स्प्रे गरेर पनि यसको निदान गर्न सकिन्छ ।
जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना । (साभार )
प्रकाशित मिति २०७७ चैत २६ गते बिहिबार ०३:१०